मृगौला रोगको निदान र उपचारमा न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाको भूमिका • Health News Nepal
सन्दर्भ: विश्व मृगौला दिन, World Kidney Day themed Living Well with Kidney Disease
The role of nuclear medicine services in the diagnosis and treatment of kidney disease Dr Ziban Paudel
न्यूक्लियर मेडिसिन (नाभिकीय चिकित्सा) मा रेडियोधर्मी अर्थात् रेडिएसन (Nuclear medicine imaging) निस्किने औषधिको प्रयोग गरेर बिरामीको विभिन्न रोगको जाँच तथा उपचार गरिन्छ । यसमा दुई वटा मेसिनको प्रयोग भएको हुन्छ – पेटस्क्यान र स्प्याक्टसिटी हो ।
१) न्यूक्लियर मेडिसिन सेवा कस्तो सेवा हो ?
न्यूक्लियर मेडिसिन चिकित्साशास्त्रको अत्याधुनिक र अति विशिष्ट सेवा हो जसमा रोडियोधर्मी दवाइको प्रयोग गरेर शरीरका विभिन्न अंगहरुको गहन जाँच हुन्छ ।
२) न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने मुगौलाको स्क्यान कस्तो स्क्यान हो ?
यो मृगौलाको अवस्था हेर्नको निम्ति गरिने जाँच हो जसमा सानो मात्रामा एक किसिमको रेडियोधर्मी दवाइ नशाबाट दिइन्छ । त्यो दवाइ मृगौलामा मात्र जान्छ । रेडियोधर्मी भएको कारण मृगौलामा गईसकेपछि त्यसबाट गामा कण निस्कन्छ जसलाई गामा क्यामरा, SPECT वा SPECT/CT को माध्यमबाट छवि बनाइन्छ । त्यसरी बनेको इमेजलाई आवश्यक परेको खण्डमा सि.टी. स्क्यानको इमेजसित सम्मिश्रण गरेर हाइब्रिड इमेज बनाइन्छ जसको रिपोर्टिङ्ग न्यूक्लियर मेडिसिन विज्ञ डाक्टरले गर्छन ।
यो पनि पढ्नुहोस्: के हो त SPECTICT ? कस्ता बिरामीले लाभ लिन सक्छन् !
३) मैले कस्ता रोगहरुको लागि न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने मृगौलाको जाँच गर्नुपर्छ ?
क) मृगौला सुन्निएको ।
ख) मृगौलामा पत्थरी भएको ।
ग) पिसाबमा ब्लक भएको ।
घ) जन्मजात भिन्न किसिमको मृगौला भएको ।
ङ) मृगौलाको अपरेशन गर्नुपर्ने अवस्था भएको ।
च) मृगौलामा पिप जम्मा भएको ।
छ) मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु अगाडि र गरिसकेपछि (दिने र लिने दुवैमा)
ज) पटक पटक पिसावमा संक्रमण भएमा
ञ) कुनै एक मृगौला नदेखिएको र त्यो खोज्नुपरेमा ।
ट) मृगौलाको आकार सानो भएमा वा जन्मजात अन्यत्र ठाउँमा रहेमा ।
ठ) कुनै एक मृगौला निकै खराव भएको कारण फाल्ने वा बचाउने निर्णय गर्नको निम्ति
४) न्यूक्लियर मेडिसिन जाँचबाट मृगौलाको के कस्तो जानकारी पाउन सकिन्छ ?
क) मृगौलाले कति प्रतिशत काम गरेको छ, अथवा काम गरेको वा नगरेको अवस्था ।
ख) अपरेशन गर्नाले मृगौलको काममा कति प्रतिशत सुधार भएको ।
ग) मृगौलामा रक्तसञ्चारको अवस्था
घ) छुट्टाछुट्टै मृगौलाले कति रगत फिल्टर गरेको ।
ङ) प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाले काम गरेको वा नगरेको, गरेको अवस्थामा कति प्रतिशत काम गरेको ।
च) पिसाबको संक्रमणले मृगौलामा असर गरेको वा नगरेको ।
५) न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने मृगौलाको जाँच गर्दा कत्तिको जोखिमयुक्त हुन्छ ?
न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने मृगौलाको जाँच अमेरिका, वेलायत, क्यानडा र युरोपमा दैनिक गरिने जाँच हो, यो निकै सुरक्षित र स्थापित जाँच हो । मेरो अनुभवमा हजारौं बिरामीको जाँच गर्दा एकजनामा पनि दवाइको दुष्प्रभाव भेटिएको छैन, त्यसकारण यो निकै सुरक्षित जाँच हो ।
६) रेडियोधर्मी दवाइ प्रयोग गर्दा बिरामीले के सावधानी अपनाउन पर्छ ?
क) गर्भवती महिलामा यो जाँच गरिंदैन ।
ख) स्नतपान गराउने महिलाले यो जाँचपछि २४ घण्टासम्म स्तनपान गराउनु हुंदैन ।
७) न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने मृगौलाको जाँच गर्ने सुविधा नेपालमा कहाँ कहाँ छन्?
न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने जाँचको निम्ति सबैभन्दा अत्याधुनिक उपकरण SPECT/CT (सिंगल फोटोन एमिशन कम्प्युटेड टोमोग्राफी) नेपालमा चितवन मेडिकल कलेजमा मात्र उपलब्ध छ । गामा क्यामरा मेशिन भने भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल र वीर अस्पतालमा पनि छन् ।
८) के साना बालबालिकामा न्यूक्लियर मेडिसिन जाँच गर्न मिल्छ ?
यो जाँच निकै सुरक्षित भएकाले साना बालबालिका र नवजात शिशुहरुमा समेत न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने जाँच् पटक पटक गर्न सकिन्छ ।
९) भिडियो एक्स-रे, सि.टी. स्क्यान र न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने जाँच्मा के फरक छ ?
भिडियो एक्स-रे र सिटी स्क्यानले अंगको बनावटको बारेमा बताउँछन् भने न्यूक्लियर मेडिसिन जाँचले अंगले काम गरेको वा नगरेको, गरेको भएमा कति प्रतिशत गरेको, प्रत्येक मृगौलाले कति रगत फिल्टर गरेको र अपरेशन गरेको भए अपरेशन गरेको मृगौलामा कति प्रतिशत सुधार भएको गहन जाँच हुन्छ ।
१०) रेडियोधर्मी दवाइ प्रयोग गर्दा शरीरमा रेडिएसनको दुष्प्रभाव हुने कति सम्भावना हुन्छ?
न्यूक्लियर मेडिसिन जाँचको निम्ति प्रयोग गरिने दवाइको मात्रा यति न्यून हुन्छ कि त्यसको शरीरमा कुनै दुष्प्रभाव हुँदैन ।
११) न्यूक्लियर मेडिसिनबाट गरिने मृगौलाको जाँचको निम्ति मैले के-के तयारी गरेर आउनुपर्छ? जाँचको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
क) घरमा सामान्य नास्ता गरेर आउन सकिन्छ । जाँच सकिन ६ घण्टासम्म लाग्न सक्छ तसर्थ खाना/ नास्ता साथमा लिएर आउनुहोला ।
ख) प्रशस्त पानी पिएर आउनुपर्नेछ ।
ग) महिला भए महिनावारी भएको मिति जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
घ) हातको नशामा एकपटक सुई लगाउनुपर्नेछ । जाँच गर्दा त्यसबाट दवाइ दिनुपर्ने हुन्छ ।
ङ) बिरामी मेशिनको बेडमा सुतेर बस्नुपर्नेछ र यो जाँच पटक पटक गर्नुपर्छ । मेशिनको क्यामरा मृगौलाको माथि वा तल राखेर मृगौलाको जाँच गरिन्छ ।
च) आवश्यकता अनुसार पिसाब लगाउने औषधी (Frusemide) को प्रयोग गरिन्छ ।
छ) यो जाँच दर्दरहित सुरक्षित जाँच हो । एकपटक सुइ लगाउँदा सामान्य दुखाइ हुन सक्छ ।
ज) स्क्यान सकिएपछि नशामा लगाएको सुई निकालेपछि बिरामीलाई घर पठाइनेछ ।
डा. पौडेल चितवन मेडिकल कलेजमा न्यूक्लियर मेडिसिन विभागीय प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।
Tags: Bharatpur cancer hospitalCancerImagingKidney HealthNuclear MedicineSPECTICT
विश्वप्रसिद्ध मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. मलखलाल श्रेष्ठ ‘अनरेरी ओभरसिज फेलोसिप’बाट सम्मानित
Pingback: Nepalese doctor receives "Encouragement Award 2021" from Japan • Health News Nepal